बायोपिक फिल्म ‘सञ्जू’ हेरेपछि सञ्जय दत्तका मिल्ने साथीले लेखे यस्तो भावुक पत्र !  Hamrosandesh.com
बायोपिक फिल्म ‘सञ्जू’ हेरेपछि सञ्जय दत्तका मिल्ने साथीले लेखे यस्तो भावुक पत्र !
बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म सञ्जुले यतिबेला आक्रामक व्यापार गरिरहेको छ। अहिले सम्म करोडौंको कारोबार गरेको यस फिल्मको निकै चर्चा परिचर्चा पनि हुने गरेको छ।
चलचित्रमा बलिउड स्टार सञ्जय दत्तको भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेता रणवीर कपूरको अभिनयको निकै ठूलो भैरहेको छ। त्यो बाहेक फिल्ममा विक्की कौशलले अभियन गरेको पात्र कमलीको पत्रको अभिनयको पनि खुबै चर्चा भइरहेको। बिक्कीले यस फिल्ममा सञ्जयका मिल्ने स्थैको भूमिका निभाएका छन्। जो वास्तविक जीवनमा पनि सञ्जय दत्तको यस्तै मिल्ने साथी हुन्। उनी हरेक समय सञ्जय दत्तको वरपर नै देखिन्छन्।
सञ्जयका ती मिल्लने साथीको नाम हो, परेश घेलानी। परेश र सञ्जयको मित्रता सञ्जयले फिल्मी करियर सुरु गर्ने बेला तिरबाट सुरु भएको थियो। यो फिल्म हेरेपछि सञ्जयसंगै घलानी पनि निकै भावुक बनेका थिए ।
त्यसपछि उनीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उक्त भावनालाई पोखे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ‘हामीले सँगै मिलेर कयौं मुस्किल अवस्थाको सामाना गरेको छौँ।’ उनले आज पनि आफूहरु साथै रहेको र सञ्जु अहिले जिन्दगीको हिस्सा बनिदिएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्।
परेशले आफ्नो सुरक्षा कवज बनेकोमा सञ्जय दत्तप्रति कृतज्ञ रहेको बनि उक्त भावुक पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सञ्जय जस्तो साथी हुनु भाग्यको कुरा भएको र यस्तो सौभाग्यजो कोहीलाई नमिल्ने पनि उनले लेखेका छन्।